समाचार - विरोधी र प्रशंसक प्रवाह को विचलन को कारण र समाधान
एन्टी-क्रोसेशन फ्यानको प्रवाह विचलनले कन्भ्वाईड ग्यासको विचलनलाई निम्त्याउँछ, जसले प्रशंसकको दक्षतामा गम्भीर रूपमा असर पार्दछ। कारण के हो र यसलाई कसरी समाधान गर्ने? कारण र समाधान विरोधी जंग प्रशंसक प्रवाह दर को विचलन को लागी:
१. प्रवाह दरको विचलनका कारणहरू:
(१) यो हुन सक्दछ कि पाइप नेटवर्क प्रतिरोधको वास्तविक मूल्य गणना मूल्यबाट धेरै फरक छ। यदि पाइप नेटवर्क विशेषता गुणांक K को वास्तविक मान गणना गरिएको मान भन्दा कम छ, प्रवाह बढ्नेछ, र यदि K को वास्तविक मान गणना गरिएको मान भन्दा ठूलो छ भने, प्रवाह घट्नेछ।
(२) प्रशंसक छनौट गर्दा, anti-corrosion प्रशंसक को कुल दबाव विचलन को प्रभाव विस्तृत रूपमा विचार गरीएको छैन। जब वास्तविक कुल दबाव एक सकारात्मक विचलन हो, प्रवाह बढ्नेछ, र जब वास्तविक कुल दबाव एक नकारात्मक विचलन हो, प्रवाह कम हुनेछ।
दोस्रो, विरोधी जंग फ्यान प्रवाह को विचलन को समाधान:
(१) एन्टी-जंग फ्यानलाई उच्च वा कम दबावसँग बदल्नुहोस्।
(२) प्रवाह समायोजनलाई सुदृढ पार्नुहोस् र थ्रॉटलिंग उपकरण प्रयोग गर्नुहोस् प्रवाह समायोजित गर्न, जस्तै एयर वाल्भ र समायोजन ढोका समायोजन गर्ने।
()) एन्टी-जंग फ्यानको प्ररित गति परिवर्तन गर्नुहोस्।
()) पाइप नेटवर्कको प्रतिरोध बदल्नुहोस् र प्रवाहलाई कामको आवश्यकताहरूको लागि अधिक उपयुक्त बनाउन समायोजित गर्नुहोस्।
माथिका विरोधी र प्रशंसक प्रवाहको विचलनका लागि कारण र समाधानहरू छन्। जब समस्या देखापर्दछ, तपाईं माथिको पोइन्ट्स जाँच गर्न सक्नुहुन्छ र कामको सामान्य सञ्चालनलाई असर गर्नबाट फ्यान विचलनबाट बच्नको लागि कारण पत्ता लगाए पछि त्यस्तै उपायहरू गर्न सक्नुहुन्छ।
पोष्ट समय: सेप्टेम्बर २०-२०१
केन्द्रापसारक डक्ट फ्यान, एकल इनलेट केन्द्रापसारक फ्यान, फ्यूम स्क्रबर, उच्च दबाव केन्द्रापसारक फ्यान, निकास फ्यान, रेडियल ब्लेड केन्द्रापसारक फ्यान,